ဒင်ျငါးငှေ, တော့အရောင်း, နှင့်အပန်းဖြေစက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် Repair ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ် - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / ဒင်ျငါးငှေ, တော့အရောင်း, နှင့်အပန်းဖြေစက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် Repair ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့ဂျော့ဘ်
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized2မှတ်ချက်များ 1,736 views
န်ဆောင်မှုများ, တောင်ပေါ်မှာ, ငွေသား restore, သွားရည်စား, ဗီဒီယိုဂိမ်းအပါအဝင်သို့မဟုတ်အပန်းဖြေစက်များ, juke သေတ္တာများသို့မဟုတ် slot ကစက်တွေ, သို့မဟုတ် adjust.
တ္ထုများ အသုံးပြု. စက်ဖြည့်ပါ, ထုတ်ကုန်, ရန်ပုံငွေများ, အဖြစ်ကအခြားပစ္စည်းများ.
ထုတ်ကုန်ကနေငွေသားများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ရယူ, အကောင့်များကို ပြင်ဆင်., နှင့် concessionaires နှင့်အတူမှတ်တမ်းများပြန်လည်သင့်မြတ်.
Make ကုမ္ပဏီစေ့စေ့တက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မော်ဒယ်များ restore မှတောင်းဆိုထားသည်.
သင့်လျော်တဲ့ operating သိရှိနိုင်ရန်မှစာမေးပွဲဖြစ်ကြောင်း devices.
သော့ချက်ဖြစ်ကြောင်းပြုပြင်မှုများလိုအပ်နေပါသည်ရှိရာကိစ္စများတွင် devices များသင့်ရဲ့ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်ထိုသို့ဆက်သွယ်ပါပြုပြင်သည်အခြားဖြစ်ကြောင်းန်ထမ်းသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေး.
ပစ္စည်းကိရိယာများအင်အားသုံး features နဲ့အပူထိန်းကိရိယာပြောင်းလဲ.
ချွတ်ယွင်းနေဒြပ်စင်ပြောင်းနည်း, အော်တို Teller ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်အသုံးသံလိုက်စိတ်ထဲအပါအဝင် (ATM စက်များ) ကဒ်များကိုစာဖတ်သူများ.
အစီအမံများနှင့်အကြွေစေ့ကိုပြောင်းနှင့် restore, ရောင်းကုန်ပစ္စည်းများ, သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်နည်းပညာများနှင့်လျှပ်စစ်ဒေသများ malfunctioning ကိုပြောင်းလဲ, လက်-tools တွေကိုလျှောက်ထား, ဂဟေသံ, နှင့်ကားချပ်.
ပစ္စည်းကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု get အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်လိုအပ်ခဲ့သည်.
devices များ Disassemble, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီနှင့်, ကိုယ်လက်နှင့်အာဏာ tools တွေကိုအသုံးချဖို့.
အသိပညာ-အသိပညာ Reading အလုပ်-related စာတမ်းများအတွက်စာကြောင်းများနှင့်စာကြောင်း created.
အခြားအ-လူတွေပြောတိုင်းမှပြီးပြည့်စုံသောအာရုံကို active-နားထောင်ခြင်း-ကမ်းလှမ်း, သငျသညျတညျဆောကျခံရအချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်လေးလည်း, မှန်ကန်သောအဖြစ်မေးခွန်းများကိုအံ့သြ, နှင့်မလျော်ကန်သောအချိန်လေးမှာလမ်းပြနေဘယ်တော့မှ.
တရားသဖြင့်စီရင် critical-အတွေးအခေါ်-အလုပ်သမားများနှင့်အခြားအဖြေတွေကို၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ထင်, ပြဿနာများမှတွေ့ရှိချက်သို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ.
နည်းလမ်းများ-ရွေးချယ်ခြင်းသင်ယူခြင်းနှင့်လတ်ဆတ်သောအရာတို့ကိုလေ့လာနေသို့မဟုတ်နည်းပြအလုပ်ကိုအခါအခွအေနေတငျပွ coachingORinstructional နည်းလမ်းများနှင့်ကုသအလုပ်သမား.
မိမိကိုယ်ကို၏စစ်ဆေးခြင်း-TrackingPEREvaluating စွမ်းဆောင်ရည်ကို, အပိုဆောင်းဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်များ, သို့မဟုတ်ကော်ပိုရေးရှင်းမှန်ကန်သောခြေလှမ်းများယူသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်.
လူမှုရေးအမြင်-သိမှတ်ကြလော့အခြားသူတွေ’ သဘောထားတွေကိုသူတို့ကလုပ်ပေးနေချိန်မှာသူတို့ပြုမူအဘယ်ကြောင့် သိ..
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. ညှိနှိုင်းရေး-ပြောင်းလဲလုပ်ရပ်များ’ လှုပ်ရှားမှုများ.
Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-Active ပုဂ္ဂိုလ်များကိုထောကျပံ့ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေ.
စစ်ဆင်ရေးအားသုံးသပ်ခြင်း-Analyzer တစ် layout ကိုအောင်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ.
ဂီယာရွေးချယ်ရေး-ဖော်ထုတ်ခြင်း tools များနှင့်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့မျိုး.
installation-ထည့်သွင်းခြင်း devices များ, ထုတ်ကုန်, cabling, features တွေဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် applications များ.
အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုများအတွက် programming-Writing ကွန်ပျူတာ packages များ.
function ခြေရာကောက်-မြင်လျှင်ကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများ, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, သို့မဟုတ် gauge သေချာတစ်ခုကိရိယာများသင့်လျော်စွာအလုပ်လုပ်စေရန်.
ကမဆိုနှင့် ပတ်သက်. သွားကြဖို့အဘယ်အရာကိုဦးတည်ချက် functioning နဲ့ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆက်ကြောင်းနောက်ကွယ်မှ troubleshooting-ဆုံးဖြတ်အချက်များ.
လိုအပျသောနည်းလမ်းများအသုံးချဖို့ Restoring-Restoring ပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်နည်းစနစ်.
အရည်အသွေး-ထိန်းချုပ်ရေးကုန်စည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-ကွပ်မျက်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်, ကုမ္ပဏီများမှ, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆိုင်သောနေရာများတွင်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို.
စနစ်များအားသုံးသပ်ခြင်း-ဆုံးဖြတ်ရမယ့်နည်းလမ်းလည်ပတ်ရမယ်ဘယ်လိုအခြေအနေများအတွက်လမ်းအပြောင်းအလဲများ, စစ်ဆင်ရေး, နှင့်လေထုအကျိုးခံစားခွင့်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ.
systems စွမ်းဆောင်ရည်၏ခြေလှမ်းများသို့မဟုတ်အချက်ပြမှုများအားသုံးသပ်ခြင်း-ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်လည်းစနစ်၏ပစ်မှတ်မှဆွေမျိုး, အဆင့်တစ်တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ကြောင်းသို့မဟုတ်သင့်လျော်သောထိရောက်မှုရှိခဲ့.
အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု-Control oneis ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခါသမယ.
ထူထောင်မှု၏သင့်လျော်အသုံးချမှပစ္စည်းနည်းလမ်းများ-မြင်နေနှင့်တွေ့ရှိချက်များ၏စစ်ဆင်ရေး, ဂီယာ, နှင့်ပစ္စည်းများသီးခြား function ကိုလုပျဆောငျဖို့လိုအပျ.
အလုပ်သမားအရင်းအမြစ်-ထူထောင်အားတက်စရာ၏ကြီးကြပ်မှု, သူတို့လုပ်ကိုင်သောကွောငျ့လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုဦးဆောင်, အဆိုပါကျူးကျော်များအတွက်အကောင်းဆုံးကလူကိုဖျောထု.
ဇွဲ – 79.81%
အကွောငျးရငျး – 88.12%
ခေါင်းဆောင်မှု – 88.68%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 89.30%
အခြားသူများအဘို့ကိစ္စ – 83.92%
လူမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 77.94%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 83.98%
ဖိအား Threshold – 88.00%
customization / Mobility ကို – 93.64%
ယုံကြည်စိတ်ချ – 89.34%
အနက်မှအာရုံစူးစိုက်မှု – 97.59%
ရိုးသားခြင်း – 89.16%
လွတ်လပ်ရေး – 96.00%
တီထွင်ဖန်တီးမှု – 88.04%
စဉ်းစား – 93.95%